Ny zaridaina haran-dranomasina, na fampielezana ny haran-dranomasina, dia mampiasa sombin-haran-dranomasina avy amin'ireo zanatany mpamatsy vola na mponina an'ala izay ateraky ny fanakorontanana ('corals of opportunity' ary mety ahitana sombina tapaka avy amin'ny tafio-drivotra, ny vatofantsika na ny fantsakan'ny sambo). Ny sombin-javatra dia entina any amin'ny akanin-jaza iray izay ahalehibe azy mandritra ny volana maromaro (6-12 eo ho eo arakaraka ny karazany), ary avy eo dia aelezina mba hamoronana fitaovana vaovao ho an'ny fanitarana na famokarana garderie. Ny fampielezana zanatanin-jaza mandritra ny taona voalohany dia ilaina hampitomboana ny tahiry ao amin'ny akanin-jaza, hampitombo ny fahafahan'ny garderie. Ary farany, ny zanatany haran-dranomasina dia nafindra ary namboarina niverina tany amin'ny haran-dranomasina voajanahary mba hitombo sy ho tonga miteraka, ary miteraka mpikaroka ao amin'ny mponina.
Ny fananganana zanatany ho an'ny haran-dranomasina ao amin'ny tanimbary dia ahafahan'ny mpitsabo hamorona zanatany an-jatony raha miova ny fahasimbana sy ny loza mety hitranga amin'ny voka-dratsin'ny vatohara. Ny fandaharam-pianakaviana maro dia nahavita nanangona ny tahirin-tsakafon'ny gardens ho an'ireo karazana an-dranomasina an'arivony tao anatin'ny taona vitsivitsy avy amin'ny tahiry voalohany amin'ny kolontsaina 100 fotsiny avy amin'ny mponina. Raha toa ny tetikasa famerenana amin'ny fitrandrahana ny haran-dranomasina fahiny dia nanindrahindra ny haran-kozatra avy amin'ny salama ho an'ny tranonkala simba mba hanamaivanana ny fanarenana, ref Ny zana-pambolena dia namela ireo mpitsabo amin'ny famerenana indray hampitombo ny haran-dranomasina taorian'ny namoahana ny 10% fotsiny ho an'ny mpanjanaka mpamatsy vola.
Hatramin'ny 2000 voalohany dia maro ireo teknika novolavolaina mba hampitombo ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny sisa velona amin'ny haran-koditra. ref Mety hitranga ny fampielezana tao-monina (in-situ) na tany-monina (aloha-situ). Misy tombony sy tsy fitoviana amin'ny karazam-pianakaviana tsirairay izay miankina amin'ny loharanom-pitaovana sy tanjon'ny programa famerenana amin'ny laoniny. Ny fitaovam-pambolena mifototra amin'ny sehatra, ohatra, dia matetika lafo vidy sy mampiasa fitaovana sy fitaovana tsy dia tsara loatra, saingy iharan'ny rivo-doza toy ny hafanana sy tafiotra mahery vaika. Ny toeram-pambolena voajanahary dia tsy mitsahatra manara-maso sy mihazona tsy tapaka, fa mora kokoa amin'ny ankapobeny ary mila mpiasa matihanina bebe kokoa. Raha mbola ny karazam-pamokarana mahazatra indrindra no ampiasain'ny saha, dia afaka mamokatra haavo maromaro ny zanatany haran-kozatra.
Ao anatin'ity fizarana ity, miresaka momba ny fiheverana lehibe isika amin'ny famoronana orinasa iray izay miorina amin'ny sehatra na landy, toeram-pambolena samihafa ampiasain'ireo mpitsabo, fomba fananganana sy fampiharana, fanangonana, fampielezana ary fananganana mpanjanatiora eny amin'ny vatohara. Mandritra io fotoam-pandrefesana io dia manolotra ny soso-kevitra momba ny planeta noforonin'i Lirman sy Schopmeyer (2016) isika ho toy ny rafitra fambolena haran-dranomasina.
Toro-hevitra momba ny dingana sy ny fandrindrana ny fampielezana ny kolonely, novolavolan'i Lirman sy Schopmeyer (2016).